LA YAAB!!: Heshiiskii Ugu Horeeyay Ee Lionel Messi Oo Lagu Qoray Af-Mariska Cuntada Kadib La Adeegsado, Fikradihii Madax Waynihii Waqtigaas Iyo Hanjabaadii Wakiilkiisa Oo La Ogaaday. - GOOL24.NET
LA YAAB!!: Heshiiskii Ugu Horeeyay Ee Lionel Messi Oo Lagu Qoray Af-Mariska Cuntada Kadib La Adeegsado, Fikradihii Madax Waynihii Waqtigaas Iyo Hanjabaadii Wakiilkiisa Oo La Ogaaday.
Heshiiskii Lionel Messi ee ugu horeeyay ayaa la ogaaday faah faahin badan oo la xidhiidha iyo waliba aragtidii madax waynihii waqtigaas maamulayay Barcelona si la mid ah hanjabaadii wiiladii Messi iyo waliba waxyaabo kale oo la xidhiidha. Xog soo baxday ayaa banaanka soo dhigay qaabkii loo qoray heshiiskii ugu horeeyay ee Lionel Messi lagu shaqaalaysiiyay.
Lionel Messi ayaa hadda ka mid ah ciyaartoyda loo arko kuwa taariikhda kubbada cagta ugu fiican kadib markii uu 31 sano jirkani ku soo guulaystay nooc kasta oo abaal marinaha shaqsiga ah iyo waliba koob kasta oo heerka kooxeed ah laakiin marka dib loogu laabto taariikhda iyo heshiiskiisii ugu horeeyay waxay isku yihiin sida cirka iyo dhulka oo kale.
Bishii December 2000 waxay tababaryaashii kooxaha da’yarta Barcelona la yaabeen hibadii iyo tayadii Lionel Messi oo Barcelona soo gaadhay isaga oo 13 sano jir ah isla markaana qaata daawayn korniinkiisa sare loogu soo qaadayay laakiin waxay tababaryaashii kooxaha da’yarta Barca la tacajabeen waxa uu wiilka yar ee Messi samaynayay.
Kadib waxaa arinta ka wada xaajooday saddex nin oo muhiim u ahaa Lionel Messi isla markaana saamaynta ugu badan ku yeeshay waayihiisa ciyaareed waxayna kala ahaayeen madax waynihii Barcelona ee waqtigaas oo ahaa Joan Gaspart, agaasimihii ciyaaraha ee Carles Rexach iyo wakiiladiisii Josep Maria Minguella iyo Horacio Gaggioli.
Sida xogta soo baxday cadaysay madax waynihii Barcelona ee Joan Gaspart ayaa u arkayay in ay halis tahay in wax heshiis ah lala galo Lionel Messi waqtigaas laakiin wakiilkii Lionel Messi ee Horacio Gaggioli ayaa ku hanjabay in uu kooxaha kale u soo bandhigi doono saxiixa Messi haddii ayna Barca doonayn in ay wiilka yar heshiis ka saxiixato.
Laakiin agaasimihii ciyaaraha Barcelona ee Carles Rexach iyo raggii kale ee la shaqaynayay oo si buuxda ugu qancay tayada iyo wacdarihii uu da’yarkii Lionel Messi waqtigaas sameeyay ayaa ka hor yimid fikradii madax waynahooda Gaspart.
Waxaana sida xogtan lagu muujiyay dhacday in heshiiskii ugu horeeyay ee Lionel Messi lagu diyaariyay goob laga qaxweeyo kadib markii ay shaqsiyaadka aan soo sheegnay ay soo daawadeen kulan ciyaarta Tenniska ay isla falanqeeyeen qaabka uu noqon karo heshiiskii da’yarkii markaas ee Lionel Messi.
Layaabkii Heshiikii Ugu Horeeyay ee Lionel Messi:
Markii ay taariikhdu ahayd December 14, 2000, waxaa goob bunka laga cabo kulan ku qaatay agaasimihii ciyaaraha Barcelona ee Carlos Rexach iyo wakiiladii Messi ee Minguella iyo Horacio waxayna isla qaateen qodobadii hesiiska Messi oo waliba lagu daray in fikradaha dadka qaar ee Barcelona ay ka soo horjeedeen heshiiskan iyada oo madax waynuhu ugu horeeyay.
Waxaana layaab noqotay in heshiiskii ugu horeeyay ee Lionel Messi lagu qoray marada ama waraaqaha afka layska mariyo marka laga cunteeyo maqaaxiyaha cuntada waxaana sidaa lagu qaatay isla heshiiskii ugu horeeyay ee Lionel Messi kaas oo halka sare aad qoraalkiisii ka arki karto.
Laakiin warar ayaa sheegay in dadkii markaas ku lug lahaa sheekadan layaabka leh ee heshiiskii ugu horeeyay ee Lionel Messi in ay doonayeen in qoraalkii afmariska lagu qoray ee heshiiskii Lionel Messi la soo dhigo carwooyinka bandhiga taariikhda iyo koobabka ee kooxda Barcelona.
Sidaa daraadeed, walxaha gacmaha iyo afka layska mariyo marka la cunteeyo ayaa noqday midkii lagu qoray heshiiskii ugu layaabka badnaa kubbada cagta aduunka kaas oo soo saaray mid ka mid ah ciyaartoyda taariikhda kubabda cagta ugu fiican.
Lionel Messi ayaan Barcelona u soo dhaliyay 566 gool kadib markii uu soo saftay 650 kulan oo rasmi ah wuxuuna hadda diirada ku hayaa in uu barbareeyo rekoodhkii abid uu ciyaartoy koox ugu dhigay gool dhalinta ee uu haysto halyayga reer Brazil ee Pele balse markii afmariska lagu qorayay heshiiskiisa muu jirin qof taariikhdan filayay balse agaasimihii waqtigaas ee Carlos Rexach ayaa fahansanaa in Messi uu mucjiso yahay isaga oo fikradii madax waynihiisa khilaafay.